Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Factory - Shiinaha Polycarboxylate Superplasticizer / Soosaarayaasha PCE, shirkado cusub
JS-104 Xarunta polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Nooca yareynta biyaha)
JS-104 waa shirkadeena cilmi-baaristii ugu dambeysay iyo soo-saarideeda, iyadoo la adeegsanayo qalabka cusub ee ugu caansan lixda kaarboon. Badeecada noocan ahi waxay leedahay heerka yaraynta biyaha, taas oo ka sarraysa JS-103, oo leh heer sare oo heer sare ah oo ka hortagga hoos u dhaca.
BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Nooca haynta sicirka sare)
BT-302 waa jiil cusub oo si dhakhso leh u sii deynaya isla markaana cabbaya khamriga hooyada ee laga sameeyay TPEG by polymerization xagjir ah oo bilaash ah, koox cusub oo sii-deyn-sii-deyn ah ayaa lagu soo kordhiyay isku-dhafka.
BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Nooca sii-haynta ee gaabiska ah ee nooca gaabiska ah)
BT-303 waa jiil cusub oo tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sii deynaya isla markaana cabaya khamriga hooyada ee laga sameeyay TPEG by polymerization xagjir ah oo bilaash ah, iyo koox cusub oo sii-deyn-sii-deyn ah ayaa lagu soo kordhiyay habka.
Tani waa jiilka saddexaad ee waxqabadka sare leh iyo bacrimiye poly carboxylic acid poly-eco-friendly, oo ay soo saartay shirkadeena bartilmaameedsanaya bacda budada ah. Budada waxaa lagu farsameeyaa tikniyoolajiyad qalajisa qalajinta oo casri ah. Qaybta budada waa isku mid cabir ahaan, waxay leedahay dheecaan wanaagsan, biyo-yar yar,